देउवाको त्यो रणनीतिक कदम जसले माहोल बदल्यो : देउवालाई मत, कोइरालालाई ‘बेस्ट अफ लक्’ ! « Sutra News
देउवाको त्यो रणनीतिक कदम जसले माहोल बदल्यो : देउवालाई मत, कोइरालालाई ‘बेस्ट अफ लक्’ !
२८ मंसिर २०७८, मंगलवार १७:०२
मंगलवार अपराह्न साढे तीन बजेको आसपासमा सभापतिका लागि मत हाल्न लागेको प्रतिनिधिको लाइनमा एकाएक शेखर कोइराला प्रकट भए । राष्ट्रिय सभागृहमा प्रवेश गर्न लागेको लाइनमा कोइराला एकाएक प्रकट हुँदा कतिपयले चिनेनन् भने कतिपय प्रतिनिधिले ‘बेस्ट अफ लक’ भने ।
कोइरालासँगै मिनेन्द्र रिजाल पनि थिए । कोइरालाले केही बोलेनन्, नमस्ते गर्दै हिंडिरहे भने रिजालले कोइरालाका लागि मत मागिरहेका थिए । तर प्रतिनिधिको मनोविज्ञान कोइरालाले यसै हार्छन्, भोट अब देउवालाई दिनुपर्छ भन्ने देखिन्थ्यो ।
कम्तीमा एक दर्जन महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग सूत्रन्यूजले कुराकानी गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांशले देउवा नै अबको निर्विकल्प नेतृत्व रहेको बताए । देउवाका पक्षमा आरआर क्याम्पस साइडमा देउडासमेत नाच गरिएको थियो । देउडा सकिएपछि कार्यकर्ताको एउटा समूहले देउवाको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेको थियो भने अर्को समूहले कोइरालाका पक्षमा नाराबाजी गरिरहेको थियो ।
मंगलवार बिहान साढे ५ बजेदेखि मतगणनाको नतिजा सञ्चारमाध्यमहरूले अपडेट गरिरहेका थिए । ८ बज्दा नबज्दै पहिलो चरणको निर्वाचनबाट सभापति चयन नहुने निश्चितप्राय बन्यो । त्यसअघि नै देउवाले सभापतिका अर्का उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न लबिङ थालिसकेका थिए ।
फलतः देउवा सफल रहे । सिंहलाई चाक्सीबारी नै पुगेर फकाउन देउवा सफल रहे भने निधिलाई पनि आश्वासन बाँडे । स्रोतका अनुसार सिंह र निधि दुवैसँग देउवाले लिखित सहमति गरेका छन् । तर दुवै नेताहरूले आफूले निशर्त देउवालाई समर्थन गरेको बताउने गर्छन् । निधिले त विज्ञप्ति नै निकालेर देउवाका पक्षमा भोट मागिसकेका छन् ।
निधि, सिंह र कल्याण गुरुङलाई आफ्नो पक्षमा मनाउन देउवा सफल भएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान बदलिन समय लागेन । अघिल्लो चरणमा भएको निर्वाचनमा कोइरालाका पक्षमा भोट हाल्ने प्रतिनिधिहरूले पनि जारी मतदानमा देउवालाई मत दिने दाबी देउवा पक्षीय नेता बालकृष्ण खाणको छ ।
राष्ट्रिय सभागृहमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खाणले देउवाले १ हजार भन्दा बढी मतले सभापतिमा जित्ने दाबी गरे । त्यस्तै कोइराला पक्षका नेता रिजालले कोइरालाले नै सभापति जित्ने बताएका छन् । सिंह र निधिले देउवालाई समर्थन गरेसँगै सभापति देउवाकै पोल्टामा पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान पनि देउवाकै पक्षमा देखिएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा कूल ४,७ ४३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ४,६७९ ले मत खसालेको खसालेका थिए । त्योमध्ये देउवाले २२ सय ५८ अर्थात् ४८ दशमलव २५ प्रतिशत मत ल्याए । त्यस्तै कोइरालाले १,७०२ मत मत प्राप्त गरे भने प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले क्रमश: ३७१, २५० र २२ मत प्राप्त गरे । कूल खसेको मतमध्ये ७६ बदर भएको थियो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई निधि या सिंहमध्ये कुनै एकको समर्थन भएको भएपनि बहुमत ल्याउन सहज थियो । निधि, सिंह र गुरुङलाई गएको सबै मत देउवाका पक्षमा आउँछ भन्ने स्पष्ट त छैन तर देउवा पुनः ४ वर्षे कार्यकालका लागि सभापति हुनेमा ढुक्क जस्तै देखिन्छन् ।
हिजो अबेर राति मतदान सम्पन्न भएलगत्तै देउवाले आफूनिकट नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर पहिलो चरणमा बहुमत ल्याउन नसकिने आफ्नो अनुमान रहेको खुलासा गरेका थिए । देउवाका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाणलगायतका नेताहरूले त्यसको भए अर्को रणनीतिमा काम गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाव दिए ।
राति नै देउवाले यताउता फोन घुमाए । सिटौलासँग कुरा गरे । सिटौलाले प्रारम्भिक मतगणनाको नतिजासँगै सक्रिय भएर लाग्ने आश्वासन दिए । मंगलवार बिहानै देउवाले आफ्ना विश्वासपात्रहरू खाण र कांग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरलाई परिचालन गरे ।
बिहानै सिंहनिवास चाक्सीबारी पुगेका दुवैले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए । तर सिंहले आफूले देउवासँगै कुरा गर्ने भनेपछि देउवा नै चाक्सीबारी पुगेका थिए ।
देउवा कार्यकर्तालाई रिझाएर भन्दा पनि आन्तरिक रणनीतिका आधारमा पुनः सभापति बन्ने योजनामा लागेका थिए । त्यसका लागि उनले शुरूदेखि नै आफ्नो विपक्षमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूको गुड पोइन्ट र वीक पोइन्ट नोट गरिरहेका थिए । के आश्वासन दिएका सिंह र निधि आफ्नो पक्षमा आउँछन् भन्नेमा देउवा जानकार र विश्वस्त देखिन्थे ।
तर कोइरालाको टीमले देउवाको यो रणनीति बुझ्न सकेन । कोइरालाले आफ्नो टीमलाई ब्रिफिङ गरेका थिए, ‘पहिलो चरणमा देउवालाई रोकियो भने दोस्रो चरणमा म सभापति बन्ने पक्का छ । त्यसैले सिंह र निधिको उम्मेदवारीले हामीलाई सहयोग नै गरेको छ ।’
कोइरालाको यस्तो भनाइले उनको टीमका सबै नेताहरू आश्वस्त भए । पहिलो चरणमा देउवालाई ४० प्रतिशतमा समेट्ने र दोस्रो चरणमा सिंह र निधिको मत आफूतिर तान्ने कोइरालाको रणनीतिलाई देउवाले असफल बनाइदिए ।
देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘शेखर समूहले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अन्य तीन उम्मेदवारको मत आफूतिर स्वतः आउँछ भनेर बसिरह्यो । तर देउवा एक कदम अगाडि निस्के । उनी आफैं झण्डासहितको गाडीमा सिंहको घरमा पुगे । जेजे आश्वासन दिनुपर्ने हो दिए र सिंहलाई आफ्नो पक्षमा पारे । देउवाको रणनीतिक सक्रियता नै उनको विजयको आधार हो ।’
देउवाविरुद्ध कोइरालाले तय गरेको काउन्टर रणनीति यतिबेला प्रत्युत्पादक भएको छ । कोइरालाले दोस्रो चरणको मतदान अघि प्रतिनिधिहरूबाट ‘बेस्ट अफ लक’ त पाएका छन् । तर उनको ‘लक’लाई पनि मतले साथ दिनुपर्छ । कांग्रेसको भावी सभापति ‘लक’ले नभएर मतले छानिने हो ।
प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७८, मंगलवार १७:०२
संघीय सरकारले धोका दिए पनि सफलतापूर्वक काम गरें- दिलिपप्रताप खाँण [अन्तर्वार्ता]
एमसीसी र गठबन्धनमा चक्रव्यूहको राजनीति: कसले के पाए, कसले के गुमाए ?
प्रचण्डका कारण सरकारमा देउवा-ओली सहकार्य हुँदै, गठबन्धन टुट्ने पक्का !
एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेस- कस्तो हुन्छ अबको प्रक्रिया ?
हनिमून- युवापुस्तालाई दमदार सन्देश